Global Voices teny Malagasy · 9 Mey 2018
09 Mey 2018
Tantara tamin'ny 09 Mey 2018
Kurdistance: Tsy Misy Vaovao Tsara
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 09 Mey 2018
nitondra hatezerana sy hadisoam-panantenana nanoloana ireo fihetsiketsehana tsy nampiova mihitsy ny fiainan'ny mponina Kiorda ireo lohahevitra mahavàka saina tao amin'ireo blaogy Kiorda
Azia Afovoany sy Kaokazy 09 Mey 2018
Tapa-bolana izay dia fehezan-dahatsoratra mahaliana sy fanehoankevitra mananihany niaraka tamin'ny sary mamirapiratry ny fetibe voalohan'ny dadabe noely rehefa ririnina any Kyrgyzstàna no natolotra tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Kyrgyz ...
Eoropa Afovoany & Atsinanana 09 Mey 2018
Niara-niasa tao afovoan-tanànan'i Budapest ireo mpanao maritrano, mpanakanto, biolojista ary teknisiana mba hampisehoana fa afaka mandray anjara amin'ny fanatsarana ny tontolo iainantsika ny fambolena ahidrano.
Jordania: Mankalaza ny firenen'izy ireo ny mpandefa sioka
Amin'ny tetikasa izay natsangan'ny mpandefa sioka avy amin'ny firenena Arabo hafa, namorona sy nitazona tenirohy mankalaza ny zavatra 50 voalohany tian'izy ireo indrindra momba ny fireneny ireo Jordaniana mpisera tranonkala bilaogy madinika Twitter.
“Niriko ho lehibe tao anatin'izany trano izany ny zafikeliko”: Fijoroana vavolombelona avy amin'ny renibe Syriana 61 taona avy ao Zamalka
Niriko mba ho lehibe tao ny zafikeliko, mba ahafahan'izy ireo manisy fiainana vaovao amin'izany trano izany, tahaka ny nataon'ireo taranaka rehetra tamin'ny razambenay.
Nolazain'ireo mpikatroka ao Moskoa fa notapahin'ny orinasam-pifandraisandavitra, araka ny baikon'ny polisy, nandritra ny hetsi-panoherana ny tambajotram-pinday
Efa fahita hatrizay ny fahatapatapahan'ny tambajotra rehefa misy hetsi-bahoaka ao Rosia, kanefa nilaza ireo mpikatroka ankehitriny fa ninia nanaratsy ny kalitaon'ny tolotra noho ny baikon'ny polisy ny orinasan'ny fifandraisandavitra.
Costa Rica: Lahatsary antserasera miampy vazivazy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena
Amerika Latina 09 Mey 2018
Maro ireo KostaRikana no naneho ny ahiahiny mikasika ireo kandidà sy ny hoavin'ny fireneny tamin'ny fanesoana sy ny vazivazy tao anaty lahatsary nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tao Costa Rica izay natao ny Alahady.
...fomba iray atao mba hamelomana amin'ny fomba artifisialy ireo asa fanontàna efa miala aina ara-toekarena avy amin'ny fanjakàna, izay efa miendrika kolikoly miafina manjaka sahady eny anivon'ny toerana fampianarana ankizy.
Goatemalà : Tanora Iray Maty Nisy Namono, Nangina ny Lokanga
Araka ny ambaran'ilay mpanoratra sady poeta, Victor Hugo, “ny mozika no manambara izay tsy hay lazaina ary ireo zavatra izay tsy hay ny tsy hiloa-bava."